USINDE ngokulambisa owesifazane okhulelwe wasendaweni yase Nhlazatshe, emva kokuba iloli ebelithwele isihlabathi ligibele phezu kwakhe , emva kokuba umshayeli walo ehluleke ukulilawula ngoLwesibili ekuseni.
UNksz Lwazi Shezi (23) onezinyanga ezinhlanu ekhulelwe kuthiwa uphuthunyiswe esibhedlela emva kokuba elimale imilenze. Ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwa lithe lo wesifazane ubethunywe ukuyothenga isihlabathi ngase BP garage, ngenkathi umshayeli weloli osolwa ngokuthi ubedle amanzi amponjwana ezame ukweqa ulayini wesitimela.
“UShezi ubephakathi kule loli njengoba ebesebuyela ekhaya nesihlabathi. Ithe uma iqeda ukweqa ulayini wesitimela, yacima iloli. Umsizi womshayeli ube esezama ukufaka itshe ngemuva ukuze ingahlehleli emuva. Utshele umshayeli ukuthi angabe esazama ukuyidumisa. Asazi kwenzekeni kumshayeli noma ubelawulwa utshwala, kodwa uzame ukuyidumisa ngenkani iloli yagxuma.
Ngenkathi lo owesifazane ebona lokho uvule isicabha wagxumela ngaphandle kanti vele iloli isiphelelwe amabhuleki yagibela phezu kwakhe. Ilungu lo mndeni elikhulume ne-Echo lithe lo wesifazane uyalulama yize bengathembi ukuthi omunye wemilenze yakhe uyophinde ukwazi ukulunga indlela odlavazeke ngayo.
Okhulumela abezimo eziphuthumayo uMnu Robert Mckenzie ukuqinisekile ukuthi owesifazane okhulelwe utholwe ecindezelwe iloli, wabe esephuthunyiswa esibhedlela. Uthe
Okhulumela amaphoyisa kwiPlessislaer Cluster uKapteni Musa Ntombela uthe: “ Kuvulwe icala lokushayela ngobudedengu. Umsolwa uyaphenywa kabanzi”